Waxa loogu yeero calaamadaynta mashiinka calaamadaynta otomaatiga, guud ahaan loogu yeeraa heer sare oo qalabka calaamadaynta otomaatiga ah, inta badan kontoroolada servo (PLC), noocyo kala duwan oo shaqeynaya iyo mashiinka sumadaynta otomatiga ah ayaa la hagaajiyay. Xawaaraha calaamadda
Sida loo isticmaalo irbadda dhiigga
Cirbadaha dhiigga waxaa loo qaybiyaa: Meesha maqaarka durugsan ama maqaarka asalka u ah cunugga cunugga si aad u hesho raad dhiig. Unugyada dhiigga iyo bayoolaji, taariikh, microbiological, virological, iyo ...
Ururinta dhiig aruurinta dhiig ururinta xun ee dhiig karka, soo ifbaxayaal tiro badan oo qalabyo otomaatig ah iyo baaritaan caafimaad oo casri ah oo looga baahan yahay keydka dhiiga, kaliya maahan tikniyoolajiyada aruurinta dhiigga, laakiin sidoo kale shuruudaha aruurinta dhiigga vacuum ...
Horumarinta alaabada cusub inta lagu gudajiro Coronavirus
waxaa maamula 20-05-08
Shijiazhuang Kang Weishi horumarin caafimaad ayaa soo saaraysa alaabooyin cusub oo loogu magac daray Tuubada Sanjabiilka ah ee la tuuray, alaabooyinkan ayaa ku habboon ururinta, qaadista iyo kaydinta shaybaarada fayraska. ...
Hawlaha uruurinta dhiiga
by admin 20-04-20
Mashiinka Coagulation → tubada joogtada ah ee dhiigga tube tubada dhiiga ka-daata → tubada kiimikaad. Fiiro gaar ah: tubada joogtada ah ee dhiiga waa in lagu qaadaa tuubada labaad si kastaba (tuubada dhiigu waa tuubada sedexaad marka dhaqanka dhiiga uu aad ujecelyahay), marka laga reebo sheyga dhiiga ee joogtada ah. Dhamaan tuubo ururinta dhiiga ...
Mararka qaar hemolysis wuxuu dhacaa inta lagu gudajiro baaritaanada dhiiga, waa maxay sababtu?
1. Sababtoo ah xididdada dhiigu aad bay u khafiifsan yihiin oo socodka qulqulka dhiigga ma aha mid siman, rabitaanka soo noqnoqda ee siringaha ayaa aad u dheer, sidaa darteed unugyada dhiiga ayaa burburay oo si kulul u socda; 2. Marka dhiiga lagu duro tuubada aruurinta dhiiga, cadaadisku aad buu u badan yahay, oo tartiib tartiib looma d ...